🥇 Uhlelo lokushintshanisa kwamazinyo
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 291
Ividiyo yohlelo lokushintshanisa kwamazinyo
Oda uhlelo lokushintshanisa kwamazinyo
Ukuzenzakalela kwamazinyo kuthuthuka ngokushesha ngenxa yokutholakala kobuchwepheshe bokuzenzekelayo. Kusetshenziswa nohlelo lokuzenzekelayo kwamazinyo, olungenye yezindlela zobuchwepheshe zokwenza amazinyo azenzekelayo njengohlobo lomkhakha womsebenzi webhizinisi, kepha kuyaqabukela. Ungathola amakhophi angavamile ezinhlelo zamazinyo ezishintshayo kwi-Intanethi, kepha zonke zidinga izinkokhelo ezijwayelekile ukuvunyelwa ukuthi zisebenze kuyo, noma nje zintule ukusebenza okubanzi umuntu angathanda ukukubona kuhlelo olunjalo. Okuhlukile kulokhu okungenhla yi-USU-Soft - uhlelo olusha olusha lwe-automation dentistry advanced. I-USU-Soft ihlanganise zonke izici osomabhizinisi abangajabula ukuzibona ku-automation yamazinyo. Uhlelo lwe-automation yamazinyo kulula ukuyisebenzisa futhi alwenzi izidingo zanyanga zonke zemali yokubhalisela ukusebenza kulo. Uhlelo lokuzenzakalela lwamazinyo lusebenza ngisho nakukhompyutha yasekhaya elula futhi akukho mishini ekhethekile edingekayo kulo. Umthombo wemisebenzi uyinzuzo enkulu, ngoba uhlelo lokuzenzakalela kwamazinyo lungathola indlela yokusebenza kwanoma yimuphi umtholampilo wamazinyo futhi luyethule luzenzele lona ngendlela yalo. Ngosizo lohlelo lokuzenzakalela kwamazinyo, ulawula amahora okusebenza kwabasebenzi, wenza i-aphoyintimenti neziguli, ulawula imithi, ubale izindleko zokuhlinzekwa kwezinsizakalo, futhi usebenza nezinhlu zamanani amaningana namaqembu ahlukahlukene amaklayenti kanye.
Uhlelo lwe-USU-Soft dentistry automation aludingi okuningi kwikhompyutha yakho futhi ludinga kuphela isikhala esithile ukuze lukwazi ukusebenza ngempumelelo. Futhi ungagcina imininingwane njengekhophi eyisipele kudrayivu ejwayelekile ye-USB, ukuze kuthi uma kwenzeka okuthile, uthole imininingwane yakho kalula. Futhi, uhlelo lokuzenzakalela kwamazinyo luxhumana nababhalisi bezimali, amaphrinta wamarisidi, nawo, enza kube lula ukusebenza kwejubane lomsebenzi namakhasimende futhi ikuvumela ukuthi ubanikeze idokhumende yezimali njengenkokhelo yobufakazi bezinsizakalo. Ngosizo lohlelo lwe-USU-Soft lokuzenzakalela kwamazinyo, usungula izinqubo zomsebenzi wokulawula nezinokulinganisela ezisebenza ngokoqobo ku-automode. Ngasikhathi sinye, ukusebenza neziguli kushesha kakhulu, kukuvumela ukuthi unikeze izinsizakalo kubantu abaningi. Lokhu kukuvumela ukuthi ukhule ube ngumholi phakathi kwezimbangi futhi uthole imali eningi kakhulu.
Ukwenza isinqumo sokuzenzela umtholampilo, udinga ukwazi izinzuzo zokusebenzisa lobu buchwepheshe. Sizoklelisa, ngokombono wethu, izinzuzo eziyinhloko (ezomnotho nokunye) umtholampilo wamazinyo noma isikhungo sezokwelapha esingazithola ekusebenzeni kohlelo oluzenzakalelayo lokuphathwa kwemishini yamazinyo. Lezi zinzuzo zingahlukaniswa ngamabhulokhi alandelayo ezinkinga. Okokuqala, ukukhishwa noma ukunciphisa izinsongo ebhizinisini ngabasebenzi abangathembekile (ukuthunyelwa kweziguli ukwelashwa okukhokhelwe kweminye imitholampilo, ukuhlinzekwa kwezinsizakalo zesithunzi, imfucuza yezinto ezisetshenziswayo). Okwesibili, yisiyalo sezezimali seziguli (njengoba kukhombisa ukwenziwa, ngokungabikho kokulawulwa okufanele ngabaphathi, ukungakhokhelwa kweziguli kungadala umonakalo omkhulu wezezimali enkampanini) Okwesithathu, ukwanda kokuya emitholampilo kweziguli ngokusebenza sebenza ne-database yamakhasimende (izivivinyo zokuvimbela, izingcingo zokuqhubeka nokwelashwa); ukunciphisa ukungahambi kweziguli ngezikhumbuzi ngocingo nange-SMS
Imvamisa odokotela emitholampilo abakulawuli ukukhokhelwa kweziguli, bakushiye kunembeza wabaphathi. Lokhu kungavunyelwa, ngoba udokotela kufanele abe nentshisekelo yenqubo yokwelashwa. Uhlelo lwekhompyutha lwe-automation dentistry automation lukuvumela ukuthi ulandelele ngokusobala abakweletayo, ubakhumbuze ngesikweletu sabo ekuvakasheni kwesiguli okulandelayo, futhi ugcine ithrekhi yethemu lezinhlelo zabo zomshuwalense. Ungazivikela kanjani ekulahlekelweni? Uhlelo lokuzenzakalela kwamazinyo lungakhumbuza ngesikweletu hhayi kuphela ngesikhathi sokubhaliswa kwezinsizakalo ezinikezwayo, kodwa futhi nangesikhathi sokufika kwesiguli noma ngisho nangesikhathi sokubhaliswa kwesiguli esimisweni. Lokhu kuvumela umphathi ukuthi akhumbuze isiguli ngesikweletu ngesikhathi, futhi mhlawumbe ahlehlise izinsizakalo ezengeziwe ezibizayo kuze kukhokhwe isikweletu. Imodyuli ekhethekile ('Ukumaketha') ikuvumela ukuthi ukhethe abantu abakweletwayo ukuze usebenze nabo ngokukhethekile ukuvala isikweletu. Uhlelo lwe-USU-Soft lwe-automation dentistry automation lukhumbuza ngezinhlelo eziphelelwe yisikhathi zomshuwalense.
Sinikela ngohlelo lwemisebenzi eminingi esezingeni elisebenza ngayo yonke imikhakha yomtholampilo wamazinyo futhi konke lokhu ngentengo engabizi. Uhlelo lwe-USU-Soft luqukethe amamojula esoftware ebiza izindleko esezingeni eliphakeme angenziwa ukuthi asebenze ngokukhetha noma njengoba kudingeka. Amamojula athengwa unomphela futhi azikho izimali ezikhokhiswayo zokubhaliselwe.
Uhlelo lwe-USU-Soft lungabizwa ngokuthi yi-universal, njengoba lungalungiswa kunoma yiliphi ibhizinisi. Sihlaziye izinhlelo eziningi ezifanayo, sabheka amaphutha okwenziwa iningi lohlelo futhi safika esiphethweni sokuthi uhlelo lwethu kufanele lube lula ngangokunokwenzeka, ukuze kwenziwe inqubo yokusebenza kulo ibe lula futhi ingabi yinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Ngenxa yalokho, uthola uhlelo olungenza izinqubo zokusebenza zibe ngcono, ngekhwalithi entsha yejubane nokunemba. Amandla wohlelo lokusebenza angakumangazi ngamandla wokuzenzakalela wobuchwepheshe besimanje. Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe kuphela obungaqinisekisa impumelelo yentuthuko yenkampani yakho.